शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ? – Tharuwan.com
पूर्व मानीनय शान्ता चौधरीज्यू,
तपाईंलगायत केही एमालेवादी थारु अगुवा, नेता, पत्रकारको अगुवाइमा दाङमा सदभाव र्‍याली निकालेको खबर पाउँदा ज्यादै दुःखी लाग्यो। यो पत्र सबैको लागि भए पनि तपाईँको लागि विशेष भनेर कोर्दैछु। किनभने तपाईं अरुभन्दा थारुको पीडा बढी बुझेको र भोगेका मेरो बुझाइ छ। त्यो सदभाव र्‍याली केका लागि थियो? थारुले समाजमा सदभाव बिगारेको हो? थरुहट आन्दोलनले कतै कुनै समुदायमाथि आक्रमण गरेको छ?
जवाफ चाहियो शान्ताजी। थारुले आफ्नो पहिचान, अधिकार र हक माग्दा कसरी सदभाव बिग्रन्छ?
यो सदभाव र्‍याली गर्नुको कुनै तुक छैन। यो र्‍याली थरुहट आन्दोलन विरुद्धको र्‍याली हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। इतिहास नै केलाउने हो भने दाङ त थारु राजाको राज्य हो। यदि तपाईँले आन्दोलन भाँड्न सदभाव र्‍याली निकाल्नुभएको हो भने तपाईँ थारुको सपूत होइन।
यो र्‍यालीलाई मैले थारुभित्रका कपूतहरुको र्‍याली भनेर चित्रण गरेको छु। यो र्‍याली थारुको पहिचान, हक र अधिकार माग्नेहरुको कदापि हुन सक्दैन।
तपाईँ पहिलोपटक सभासद हुनुभयो। त्यतिबेला लागेको थियो, एमालेले सही ब्यक्तिलाई सभासद बनायो। तर सभासद् भइसकेपछि कमलरीका निम्ति के गर्नुभयो? जसको परिणाम चुनावमा पछारिनु पर्‍यो। बल्ल बुझ्न थालेको छु। सायद त्यो पद एमालेको चाकरीबाट पाउनुभएको होला। त्यो पनि एमालेमा कमलरी बन्ने सर्तमा।
हामी ठूलो भ्रममा थियौं, शान्ता चौधरीज्यू अब कमलरी मुक्त हुनुभएको छ भनेर। बल्ल बुझ्दैछौं, शान्ता चौधरीज्यू त एमालेमा कमलरी बन्न पो गएकी रहिछन्। एमालेबाट थारुको भोट ठेक्का पो लिनुभएको रहेछ, जस्तै बैजनाथले लिएका छन्।
सरकारले घोषणा गरेपनि थारुका चेली अर्थात् कमलरी अझै मुक्त भएका छैनन्। तर तपाईँले सबै थारुलाई नै कमलरी बनाउन लागिपर्नु भएको रहेछ। अच्चम्म लाग्दैछ मलाई, थारुलाई कमैया र कमलरी बनाउनहरुलाई कसरी साथ दिँदै हुनुहुन्छ। उसको आदेशमा कसरी थरुहट आन्दोलन बिथोल्दै हुनुहुन्छ।
सम्पूर्ण थारुलाई कमलरी र कमैया बनाउन खोज्दै गर्दा तपाईं आफू कमलरी हुँदाको पीडा कसरी भुल्नुभयो? प्रश्न गर्न मन लागिरहेको छ मलाई। के थारु र थरुहट आन्दोलन सम्प्रदायिक आन्दोलन हो? थरुहट आन्दोलनले थारुको छुट्टै राज्य मागेको छ? थरुहट भनेको त थारुको ऐतिहासिक भूमि हो। थारु पुर्खाले बनाएको जमिन हो। थारुको घर हो। थारुको पहिचान हो।
वर्षौंदेखि पहिचान गुमाएका थारुलाई आफ्नो पहिचान माग्ने हक छ कि छैन? थारुले थरुहट प्रदेशमा अरु समुदायलाई बस्न नदिने गरी आन्दोलन गरेको छ र? जातीय राज्य भनेको एउटै जात बस्ने, एउटै जातको मान्छे हरेक पदमा रहने हो। तर थारुहरुले त्यस्तो प्रदेशक कहिल्यै मागेको छैन।
थारु-मधेसीलाई बिहारी भन्नेहरु सम्प्रदायिक नहुने तर हक, अधिकार र गुमेको पहिचान माग्नेलाई सम्प्रदायिक देख्‍ने? थारुको सीमाको बाँध फुट्दा तपाईँले उनीहरुलाई कसरी अपराधि देख्‍नुभयो?
तपाईँको बोली किन बन्द थियो, जब तपाईँका जमिन्दार झलनाथ खनालले थारु-मधेसीलाई धोती प्रदेश भन्दा, ओलीले थारुलाई आतंककारी भनिरहँदा? तिनीहरु जेभन्दा पनि राष्ट्रवादी अनि हक, अधिकार माग्दा थारुचाहिँ आतंककारी?
थारुको अस्तित्व धरापमा पर्दा आन्दोलनले तपाईँजस्ता अगुवाको खाँचो महसुस गरेको थियो। तपाईँको साथ-समर्थन चाहिएको थियो। तर तपाईँले समर्थन गर्नुको साटो उल्टै विरोधमा उत्रिनुभयो। तपाईँका हर्कत, तपाईँका अभिब्यक्ति देखेर ममात्र होइन, थारु समुदाय नै अच्चम्मित भएका छन्।
तपाईँका व्यक्तिगत कुरा गर्न मन थिएन। तर तपाईँ आफैं त्यसबारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइसक्नुभएको छ। र, पनि यसले तपाईँका मन दुखाउँदा माफी चाहन्छु। सौता आउँदाका पीडा म बुझ्न सक्छु। तर तपाईँले थारु आन्दोलनमा सौता राख्‍ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
फेरि पनि प्रश्‍न गर्न मन लाग्छ- तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ? त्यसैले थारुको इतिहासमा दलालको भूमिका निर्वाह गर्न छोड्नुस्। कसैको इसारामा चलेको तपाईँलाई सुहाउँदैन। पैसा र पदको लोभले थारुको भविष्य अन्धकार नपार्न अनुरोध गर्छु। वास्तविकरुपमा कमलरी मुक्त हुनुस्।
थारु विद्यार्थी समाज
मधेसी र थारुलाई नसमेटिए भविष्य स्थायित्व हुँदैन : भारतीय राजदूत
सिरहामा सेनाको ट्रक पल्टिँदा दुई जवानको मृत्यु
33 thoughts on “शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ?”
Sahi lekhnu bhayo. Santa chaudhary lai jasto bujheko thiam, tesko just ulto rahe6. Kamlari garda gardai uslai kamlari kai bani parisakya jasto 6…
संजय भाई को चिट्ठीको यो एक हरफ नै “तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ? त्यसैले थारुको इतिहासमा दलालको भूमिका निर्वाह गर्न छोड्नुस्।” काफी छ ! बडो संदर्बिक अनि मार्मिक चिट्ठी शान्ताजीलाई ! सायद शान्ताजी ले थारु र थरुहटको भावना बुझ्ने छन् यो चिट्ठी पढेर भन्ने मेरो आशा छ !
aafne sriman ko pida nabujhne le aru ko pida k bujhda xa
शान्ताजी त एमालेको एजेण्ट बन्नु भएको छ । थारुको विरुद्धमा कुनै कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भने एमाले ले यिनै लाइ प्रयोग गर्छ । त्यो वापत वहालाई यस्तै कुनै फासफुसे पद दिने होला । तर सम्झी राख्नुस तपाइका पुर्खाले चिहान बाट पनि निहाली रहेका छन् । तपाइले बाहिर बाहिर एमाले ( बाहुने पाटीको ) बखान गरे पनि भित्र तपाइको मन रोइ रहेको छ । तपाइलाइ भगवान ले त माफ गरेन । यसैको परिमाण होला सौता । जे होस् ओली ,खोलि को को लाइ के गरेर हुन्छ सौतालाई पनि कुनै पद दिलाए तपाइलाइ फाइदै हुन्छ ।
Tenzing Limbu says:
शान्ता चौधरी को धेरै अवधारणा लाई केलाउदा थारु हाट को कमलरी बाट मुक्त भए पनि वास्तव मा एमालेकी कमलारी नै हुन् पुगेको दास मनोरोगी हुन् भन्ने मेरो ठमम्याई छ l
lafaa magar says:
very good point .tapare baaunko chaak dhoera jindagi bitaaekole dimaag maathi uthna sakena thuikka ,jindagi var daasi jiwan bitaaudaa pani emaale baaun parti maa gaera kasko linga pujaa garera basi thuikka yastaalaai ta utai kaasi tira kepi baaun sanga bihe gardinu parchha . beijjati
sajaya jee timi katidin tharuko name bechera dollar khan6au ta. ani kathmanduma basera k lekh6au sak6au bhane afno jilla ma aayara lekha ra tharu nai ho bhane tharuko lagi kehi gar tesh pa6i shantako kura gara.
Dilli Tharu says:
संजय जी तिमी के मधेशीको पैसा मा विकेका छौं त । काठमाण्डुमा वसेर आन्दोलनको कुरा गर्ने । तिमी जस्ता साशकहरुले गर्दा नै देश विग्रेको छ । एउटा थारु विद्यार्थीको त अधिवेशन गर्न सक्दैनो भने सिंगो देशको के कुरा गर्छाै । एक चोटी आफ्नो अनुहार एैनामा हेरेर बोल ।
Sangam Chaudhary says:
तिमीहरु जस्तै होलान त शान्ता दिदी । शान्ता दिदी भनेको देशको नेता हो । नेपाली जनताको नेताहो । तिमीहरुको जस्तै दुइ चार जनाको नेता होइन । दुइचार जना थारुको नाममा सिंगो थारुको बदनाम गराउने तिमी शासकहरुको कामै छैन । यदि साँचिकै गरिब जनताहरुको लागि लडने नै हो भने काठमाण्डौमा आन्दोलन गर, सिहदरवार घेर, अनि शेरवहादुर देउवा, शुशिल कोइराला, केपी, भिम रावल, प्रचण्ड, विजय कुमार गच्छदार, गोपाल दहित, लक्ष्मण चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, रामजनमलाई घेराउ हाल न ? किन हामी गरिब जनतालाई दुख दिन्छौ तिमी सञ्जय जस्ता मानिसहरुले । काठमाण्डौको कोठामा बसेर फेसवुक चलाउन जानेछौ भनेर धेरै राजनीति नगर ? हामीले पनि जानेका छौ राजनीति गर्न ?
shree laksam limbu says:
sabai tharubasii sathi bhai harule k bujnu perxa bhane aba yo shanti didi ko pani2barsa matra ho samaya ferii pani malai vote deu bhandai paakai pani auxa sansar golo xa dukha pir namannu vote mangnu auda chai bike ko helmat lagayera aawos
Raiprasad Khese bung kanchha says:
Sanjay ji ko bhanai atyanta sandarbhik chha ra ramro lagyo Shanta jasta aru jan jati harule panibujhnu parchha.
Dongla Dangaura says:
sunsari ko chaudhary says:
डिल्ली जी तपाईको थोपरा चै के सारो राम्रो छ होला नामै त डिल्ली छ काम पनि उस्तै होला थारुहरुको एैतिहासिक भुमि बलात्कार भईरहेको छ के सान्ताले त्यो हेर्न कसरी सके छी ।
ईटहरीको चौकमै थारुहरुको ग्रामथान छ अहिले बिकासको नाममा ग्रामथानलाईनै समाप्त पार्दै छ । बिकास गर्दा थारुहरुलाई राखेर निकास निकाल्लनु पर्छ की पर्दै त्यो खोई गरेको छ राज्यले ।
पश्चिममात यो भन्दा पनि बेहालछ थारुको अवस्था कती बुझाउ अबैध सन्तानहरुको कामै उल्टो गर्दा रहेछ ।
Sahi bhannu tapai harule tara santa ji le afnai kguttta ma bancharo hanne kaam garnu bhaye xa yo malai kadapi suikarye hune xaina
धेरै पढे लेखेका थारू नेताहरूमा त दासत्व, अरुको झोले र पीछलग्गु मनोव्रिती जकडिएको छ भने बिचरी शान्ता एक त कम पढेलेखेकी त्यसमा पनि कमलरी भएर बसेकी ! एमालेका केही थारू नेताहरूको झोले, दासत्व र पीछलग्गु चरित्र देखेर उनीमा जोश र जाँगर मरीसकेकोछ.
kanta lal chaudhary says:
कम्लरी लाई के थाह राजनीति का छलकपटका कुरा , थारुले शान्ताका मालिक संग राजपाट मागेका होइन, मात्र सममान पुर्वक बाच्ने, आफ्नो रितिरिवाज मान्न पाउने तथा राज्य व्यवस्था ले थारु लगायत मधेसी प्रति गरिने दुर्ब्यबहार को बिरुद्ध हो , बिचारी एमाले को कम्लरी ले मालिक ले भनेको न मान्ने उसलाई थारु को अधिकार संग के सरोकार ……
सञ्जय भाईको बिचार एकदम राम्रो छ ।
चौधरी जेठो says:
स‌जय जीकाे लेख गजव रहेछ तर यो मधेश अनि थारुवान भारतले तराइ मिच्दै ल्याउदा तपाइ के गर्दै हुनु हुन्छ नेपाल पछी अरु भाग नेपाली पछि अरु जात हो । सुस्ता िस‌गै गाउ सकियो कोहि वोलेन अहिले स‌घियता पनि चाहिने अनि जिल्ला पनि क्षेत्र पनि अखण्ड खोज्ने यसरी हुन्छ । यहा चाहि कहाका डलरमा दास वस्नु भएको छ गाउमा सवै सोझा सिधालाइ भडकाइ अाफु काठमाडौमा लुक्नु हुन्छ नि । तपाइि जस्तो विदेशीकाे दास वन्नु भन्दा त एमाले का‌ग्रेस कै दास वन्नु वेश ।
Santosh Dahit says:
शान्ता चौधरी त आफ्नो सास हुदासम्म एमालेको कम्लरी बस्नुहुन्छ । तर, सन्जय जी तपाई कुन पार्टीको कमैया हुनुहुन्छ थाहा भएन त । की सोझा इमान्दार थारुलाई बेचेर थारुको राजा बन्न खोज्नु भएको हो ?
कम्तिमा थारु छुट्टै जन्तु नभएर थारु पनि मान्छे भन्ने त शान्ताले बुझ्नु भो । मान्छे बाहेक् अन्य जन्तु बुझेको भए चार किल्ला तोकेर थारुको लागि यति छेत्र चाहियो भन्नु हुन्थ्यो होला ।
Santa DD ati chado kamlari huda ko pida birsanu va ko rahechan, tapai lai marne bela dukha nalagosh, je tai lai uchit lagcha garnus. Mannu huncha vane aunus ajha sahakarya garau, ajha kehi bigre ko chaina jaba saamma sas taba samma aas hunxa. Hami ek din mukta hunxau nai. Tapai navaye ni….. Tara tapai pani hamro ragat ho tapai lai kasari chhadera jane vanera matrai ho …..
CooL Chaudhary says:
साँच्चिकै शान्ता चाैधरी थारुहरुकाे विरुढमा उभिएकाे पाएँ । थारुकाे हक अधिकारका लागि उभिनु पर्ने र लड्नु पर्ने बेलामा शान्ता जीले थारु अान्दाेलन र थारुहरुलाई नै दबाउन तिर लागिन् ।
laafa magar says:
timi jasto laafa magar ma poni ho tara yesto ajo voli poni jaat kura garne 12aau sataabdi ko manxe ho ki 21aau sataabdi ko janawar hau khabadar abo dekhi jaat ko garna paaidaina mero name bechera billa uudaaune mero name poni laafa magar ho ….yeti kura bugibakselaa
kalo bahaaun says:
ye cool g tapai le ta khub tharu ko raja banna khojnu vaye jasto xa baru yesari kura ghumaauna vanda sidhai ngo xodera rajniti maa aaye vaigo ne kina shanta timi haru jastai jati baad bakti baad neta hoina shanta vaneko des vakti neta ho chetana vaya voli yehi shanta ko pokshya maa lagne xau
Sidhai Shanta Chaudhary lai tharu samuday bata nikalnu parxa ho sir jun samuday bata
usle agadi badhne mauka pai usai samuday mathi xura parhar kadapi huna dinu hunna.pakka pani usle afno pahilako dukha bujhnu parne thauma ahile usle as tharu haruko ha adhikar bujhna saki rakheki xaina,thuli vaisaki abata kaha bujhxe ra yo marma ahile ta u ac ma baser bahun haru ko dasi baneki xe,,xi asta c grade ki bahun,,tharu samuday vitra pasnai dinu hunna asta bahunka rajnitik kamlari lai,,jay tharu wan tarai tharu hamro swarga ho…
Santa G tapai laai bhanna ta mero ni dherai thiyo Asti bharkhar chitwan ko sekhwani gaau ma Aayra aafu kamlahari huda ko pida sunaudai hunu hunthyo aafu sriman baata pidit bhako kura sunaudai hunhu hunthyo Tara tyo bhid ma ma tapai samu aauna man lagena tapai laai sodhna man huda hudai maile sodhne aat garina kina ki mero prasna ko jawaf tapai sanga thiyna tapai aruko area ma Aayra xori haru ko bilauna kabita sunau nu bho Tara Ek choti aafno gaau thuu ma gayra sodhe hunxa ki? Kati cheli haru pidit xan Kati ajhai tharu haru sosit pidit xan aandolan ko naam ma tharu laai Kati kalankit paridai xa tyo tapai bujhnu hunna tapai ta kewal aafu kamlahari huda ko pida ra aafu sreman baata pidit bhako katha sunaudai thikka xa tyo din tapai Kati ko right bolnu bho malai tha xa Santa G rajniti ta garnu na Tara sahi kura bole si balla po manxe ko biswas jitna sakinxa tapai ko kura sundai malai tapaiko najik aauna man lagena socheko thiy tapai sang k hi kura garau tapai ta sabhasad bhay dekhi manxe laai sapana dekhauna pani siknu bhay xa bhayko kura garam na Santa jiu jun din tharu haru laai sa samman izaat dilauna saknu hunxa tyahi din bhanne xu tapai real Mai pida bhognu bhako rahexa
na paune le odar payo, bharar bhitra haryo jastai ho .
सर्व देव ओझा says:
शान्ता जी को बारेमा अब थारू समुदायका भाई हरू ले कमेन्ट गर्न बेकार छ , उहाको मजबूरी र जन्म पुर्व देखि को ईतिहास र जन्मे देखि बचपन र त्यहाँ देखिको जुन पार्टीका नेताका घरमा दांगमा जन्मेदेखि उहालाई पनि थाह छैन होला कि उनको बुवा आमा पनि त्यहि घरको कम्लरनी र कमैया थिए ? आज त्यहि घरका जमिन्दारहरु पहाडी शासक र त्यसैका भाई भारदार हरु नै एमाले पार्टीमा रहेका छन् भने संस्कार नै फेरी सक्यो , भने मित्र हरुले कुकुर को पुच्छर सोझो गर्ने अनाहक प्रयास नगर्दा नै बेश हुने थियो , वहा प्रति आफ्नो धेरै समय र दिमाग नखार्चिदा राम्रो ? यो मेरो सुझाव न भनि सल्लाह हो ?
Rameshwar Chaudhary says:
Yo chithi pader ramro lagyo .yastai yastai machele hamro tharu samajh lai bigade ko ho.
Sagar chaudharuy says: